देश Archives - Harekpal
पश्चिमी भेगमा वर्षाको सम्भावना, अन्यत्रको मौसम कस्तो छ ?
‘मोडल सुपर स्टार’को विजेता रवीन घिसिङ र सजना पन्त
काठमाडौं, ७ माघ । सौन्दर्य प्रतियोगिता ‘मोडल सुपर स्टार’ सम्पन्न भएको छ । राजधानीमा शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच मोडल सुपर स्टारको दोस्रो संस्करण सम्पन्न भएको हो । ३२ जना अन्तिम प्रतिस्प्रधि रहेको प्रतियोगितामा मिष्टर मोडल सुपर स्टार रवीन घिसिङ भएका छन् भने मिस मोडल सुपर स्टारमा सजना पन्त भएकी छन् । यस्तै प्रतियोगितामा पपुलर च्वाइस युवामा […]
काठमाडौं, ७ माघ । गरिमा विकास बैंक लिमिटेडले मिति २०७६ माघ ६ गते सोमबार पोखरा महानगरपालिका वडा नं.–६, लेकसाईडमा स्थापित लेकसाइड शाखा कार्यालयको औपचारिक समुद्घाटन कार्य सम्पन्न गरेको छ । उक्त शाखा कार्यालयको उद्घाटन नेपाल राष्ट्र बैंक पोखराका निर्देशकडा. डिल्लीराम पोखरेलले गर्नुभएको हो । कार्यक्रममा बोल्दै विकास बैंकका अध्यक्ष चन्द्रकान्त बरालले गण्डकी प्रदेशमा स्थापना भई […]
राजविराज, ७ माघ । पूर्वपश्चिम राजमार्गअन्तर्गत सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णा सवरण गाउँपालिका–१ मा गएराति मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी वडाध्यक्षको मृत्यु भएको छ । मोटरसाइकल दुर्घटनामा परी अग्निसाइर कृष्णा सवरण गाउँपालिकाका–१ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार चौधरीको मृत्यु भएको इलाका प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुरले जनाएको छ । पूर्वबाट पश्चिमतर्फ जाँदै गरेको को३६प ५३०६ नंको मोटरसाइकलमा सवार ३८ वर्षीय वडाध्यक्ष चौधरी आफैँ […]
काठमाडौं, ७ माघ । ‘मेरो के गल्ती छरु एक जनाको दोषको म किन भागीदार बन्नेरु एक जना चारित्रिक अपराधमा जेल जाने, मलाई सजाय हुनेरु मैले उपसभामुख छाड्नुपर्ने कारण के होरु पार्टीले लिखित देओस्।’ उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङफे आइतबार साँझसम्म नेकपा शीर्ष नेतृत्वलाई यही प्रश्न गरिरहेकी थिइन्। यस अवधिमा उनले सभामुख पदमा आफैं उम्मेदवार बन्न कोसिस […]
काठमाडौं, ७ माघ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले नेपालमा पश्चिमी न्यून चापीय प्रणालीको सामान्य प्रभाव रहेको जनाएको छ । हाल देशको पश्चिमी भूभागमा सामान्य बदली रहेको तथा अन्य भूभागमा आंशिक बदली रहेको महाशाखाले जानकारी दिएको छ । महाशाखाका अनुसार आगामी २४ घण्टामा उच्च हिमाली भेगमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात हुने एवं देशका अधिकांश भूभागमा सामान्य बदली रहने […]
लहान, ७ माघ । लहान नगरपालिका–३ स्थित सप्तऋषि अस्पतालमा तीन शिशुको मृत्यु भएको घटनामा डाक्टर र अस्पताल पक्षको लापरबाही देखिएको छ। प्रशासनले गठन गरेको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले अस्पताल पक्षको लापरबाही भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले गरेको छानबिनबाट सो अस्पतालमा एकै रात तीन शिशुको मृत्यु भएको घटनामा चिकित्सकको चरम लापरबाही देखिएको छ। गत पुस १८ गते […]
जाँदाजाँदै उपसभामुखले भनिन् : राजसंस्थाभन्दा बलियो पितृसत्ता
काठमाडौं, ७ माघ । प्रतिनिधिसभा उपसभामुख डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले पदबाट राजीनामा दिएसँगै मुलुकमा राजसंस्था फाल्न सके पनि पितृसत्ता फाल्न नसकेको बताएकी छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक आफैंले सञ्चालन गरी राजीनामा बुझाएकी उनले त्यसलगत्तै पत्रकार सम्मेलन गरी यस्तो बताएकी हुन् । हक्की, स्पष्ट र मन नपरेको कुरालाई प्रस्टसँग प्रस्तुत गर्ने तुम्बाहाङ्फेले आफूले महिला भएर पनि […]
ललिता निवास प्रकरणमा किर्ते र ठगीमा कारबाही सिफारिस
काठमाडौं, ७ माघ । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ९सीआईबी० ले ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा संलग्नहरूमाथि भ्रष्टाचारको आरोपका अतिरिक्त ठगी र किर्तेको अभियोगमा कारबाही गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । भूमाफिया र कर्मचारीको मिलेमतोमा बालुवाटारको १ सय १४ रोपनी जग्गा हिनामिनाको घटना अनुसन्धान गरेको सीआईबीले उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी र मालपोतका कर्मचारीदेखि भूमाफियासम्मको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा […]
केन्द्र र स्थानीय तहको गम्भीर त्रुटि, १ सय जना अधिकृत अलपत्र
काठमाडौं, ७ माघ । केन्द्रीय सरकार र स्थानीय तहको लापर्वाहीका कारण लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भएका १ सय जना अधिकृत अलपत्र परेका छन् । उनीहरूले तलबसमेत खान पाएका छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अधिकृत माग गरेर पठाएका स्थानीय तहको गम्भीर लापर्वाही र त्रुटिका कारण उनीहरू जिम्मेवारी र पदविहीन अवस्थामा पुगेका हुन् । […]
धनुषा, ७ माघ । प्रदेश सरकारले अवैध रूपमा सञ्चालित क्रसरमाथि कडाइ सुरु गरेपछि व्यवसायीले त्यसविरुद्ध राजनीतिक शक्ति परिचालन गर्न थालेका छन् । अवैध क्रसर निरन्तर सञ्चालनका लागि उनीहरूले प्रदेश सरकारमाथि दबाब बढाउन लागेका हुन् । यसका लागि प्रदेश २ का व्यवसायीको तदर्थ समिति नै गठन गरिएको छ । समितिको नेतृत्व महोत्तरीका क्रसर सञ्चालक प्रह्लाद क्षत्रीले गरेका छन् । उनी […]